About us - Taizhou Zhonghan Amathuluzi Co., LTD
Taizhou Zhonghan Amathuluzi Co.., LTDIsungulwe ngo-2003 (igama lenkampani elidala iTaizhou Huangyan Hongye Machiner Company), Singumkhiqizi osebenza kahle futhi othumela kwamanye amazwe onguchwepheshe bezentuthuko, ukukhiqiza kanye nokuthengisa ngosayizi ohlukile wezando ezijikelezayo, imishini engenazintambo yesando nemikhiqizo yamathuluzi kagesi, ezibophezele ekwakheni umhlaba osezingeni eliphakeme amathuluzi factory.
Sitholakala e-Chengjiang Industrial zone yedolobha lase-huangyan ngokuhamba okulula. Futhi zonke izando zethu zihambisana nezindinganiso zekhwalithi zamazwe omhlaba futhi zithandwa kakhulu ezimakethe ezahlukahlukene emhlabeni jikelele.
Singanikela nge-OEM & ODM SERVICE eprofeshinali, singenza imikhiqizo ye-3D design & product ngokuya ngamacebo okuklama amakhasimende noma amasampuli wangempela, ukuze kuqinisekiswe ukuthi isicelo sakho esikhethekile singaneliseka Uma unentshisekelo kunoma yiziphi izando zethu noma ungathanda ukuxoxa ngesiko oda, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi. Sibheke phambili ekwakheni ubudlelwano bebhizinisi obuyimpumelelo namakhasimende amasha emhlabeni wonke kungekudala.
Isitifiketi seCCC kanye nesitifiketi se-CE
Yiba namakhulu abasebenzi
Le nkampani ihlanganisa 5000 metres square
Taizhou Zhonghan Amathuluzi CO, LTD. ubeke ukugcizelela okukhulu ekuphathweni kwebhizinisi, sedlulise ukuhlolwa kwamazwe omhlaba okufana neCCC Certification kanye nesitifiketi se-CE, Le nkampani ihlanganisa amamitha ayisikwele angama-5000, inamakhulu abasebenzi, kunama-workshops amaningi, kufaka phakathi i-tooling, imishini emibi, ukusika igiya, i-aluminium ukucubungula, ukwelashwa ngokushisa, ukugaya, ama-motors kanye nama-workshops womhlangano, Ngaphezu kwalokho kunolayini bokukhiqiza abasezingeni eliphambili eChina kanye nenani elikhulu lemishini yokukhiqiza esezingeni eliphakeme kanye nemishini yokuhlola izando zikagesi futhi ikwazi ubuchwepheshe bokukhiqiza obuhamba phambili kanye nobuchwepheshe be-R & D. Sikwethula ngenkuthalo uhlelo lokuphathwa kwesayensi, ukukhiqizwa okuthuthukile nemishini yokuhlola ukuqinisekisa imikhiqizo enekhwalithi ezinzile nephezulu yokuqinisekisa ukwaneliseka kwamakhasimende okuphelele futhi sakhe ikusasa lokuwina nabo bonke abalingani bebhizinisi.
Taizhou Zhonghan Amathuluzi CO, LTD.sishintshiwe kusuka kumabhizinisi okukhiqiza saba ucwaningo oluzimele nokuthuthukiswa kwamathuluzi kagesi aphezulu amabhizinisi adumile. Njengomphumela wezando zethu ezijikelezayo ezisezingeni eliphakeme kanye nesevisi yamakhasimende evelele, sithole inethiwekhi yokuthengisa yomhlaba wonke futhi cishe izinyosi zethu ezingama-80% ziye zathunyelwa eYurophu, e-Southeast Asia, Mid-east naseNingizimu Melika